Encwadini yakhe ethi "Ubuciko Injabulo," uDalai Lama wabelane izimfihlo ezikuvumela ukuba sikujabulele ukuphila. Uma ufuna ngokushesha uthole ukuthi yini izifundo iqukethe, nokuthuthukisa manje ezimpilweni zabo, ungafunda iseluleko eziyisisekelo uDalai Lama, ezibalwe ngezansi. Uzofunda indlela yokwenza injabulo eyengeziwe ekupheni njalo, kungani uzwela libaluleke kangaka nokuthi kanjani ukukhohlwa mayelana nemicabango engakhi.
Ungagxili ezintweni kwenzekani emhlabeni
Imicimbi ekuphileni kwakho kungaba nomthelela enjabulweni yesikhashana, kodwa ke isimo ubuyela ezingeni odlule. Ngisho noma bawine i-lottery, injabulo ngeke elingapheli. Kodwa isimo ngokwengqondo umuntu umphumela evelele kakhulu emhlabeni, noma kunalokho, bezibona kwenzekani kuwo. Zama ukuziqeqesha ukubheka omuhle ngokuphila, hhayi ukugxila izenzakalo kuhlulekile. Uzoba ezikhathini ezinzima futhi uyoba behlala ngenjabulo ukuphila kwabo, kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani endaweni esihlala kuyo.
Thuthukisa ikhono ukuba nozwela
Nozwela ngabanye ehlukanisa isimo sengqondo, elingenalo ubudlova, uma ufuna ukubona noma isiphi isidalwa esiphilayo wawusemasondweni bahlupheke. Buhle ikhono ukuzwelana, hhayi kuphela ngokwengqondo kodwa futhi ngokomzimba - uzizwa injabulo ngokusiza abanye, uyobe wenze ukuphila kwakho kube isikhathi eside. Ukuthuthukisa ikhono ukuze ubonise ukuthi uzwelana, zama ukuba anake ngokwengeziwe kwabanye futhi sizame ukubheka isimo kusukela umbonwabo. Zama ukuqonda ukuthi yini ebangele ukuba indoda isimo sakhe nokuthi uluhlobo luni ihlobene yini.
Ekwakheni ubudlelwano obuqinile
Uma obuqinile nabantu obathandayo, ke iqinisekisa kuwe impilo ezingokomzimba nezingokwengqondo. UDalai Lama ngokwakhe uthi, kubalulekile ukuthi ukuba abangane nalabo abamzungezile, kuze labapheki. He is isikulungele ukukhuluma ngisho nomsebenzi, phansi metuschim. Uma ujabulile wamukele noma ithuba elikuvumela ukuba uxoxe nabanye abantu, wena ujabule ngokwengeziwe.
Thola indlela yakho engokomoyeni
Izinzuzo abanezinkolelo eziqine ziqinisekiswa izifundo ezihlukahlukene futhi kuholele hhayi kuphela yokuthola ukuphila okujabulisayo, kodwa futhi nempilo enhle. Nokho, ngqo inkolo akukho uxhumano - uDalai Lama uyaqiniseka ukuthi abantu kungaba ujabulile yikuphi ukulahlwa yicala. Into uwukuthi inkolo imane nje kwenza abantu bazizwe beyingxenye okuthile okukhulu, ukhuthaza ukunakekelwa ngomunye nomunye futhi enomusa. Lokhu kuyiqiniso ngoba umuntu ophika ubukhona bukaNkulunkulu.
Khumbula ukuthi ukuphila akwenzeki lingalimali
Abantu ngokuvamile abaqapheli ukuthi kobunzima nezinkinga - ke kuyingxenye engenakugwenywa yokuphila, kubonakala, ukuthi amandla athile amabi kuthinta khona kwabo, lapho izinto zingenzeki kahle ngohlelo. Eqinisweni, ukuhlupheka kuyobonakala njalo, abantu ibhekene nezinkinga, baguge futhi bafe. Kuyinto ubulima ukuyiziba la maqiniso zokuphila. Into esemqoka - uzizwa kanjani ngalokho okwenzeka. Uma ukholelwa ukuthi le nkinga - lena yinto ezemvelo badlale ngawe, uzoba bheka umhlukunyezwa, ngisho siqale ukuba for fike bani ongabasola. Konke lokhu ngeke kuphakamise nakho kwakho. Zama ukushintsha indlela.
Lahla becabanga imicabango emibi futhi ezingemnandi
izinkolelo Negative nemizwa enjengentukuthelo noma ukwesaba ukubhubhisa ithuba injabulo nokuthula kwengqondo. Bonke anobuthi. Kuphela ngokusebenzisa uthando, ububele, isineke, ukupha, ungakwazi ukubhekana nabo futhi ukuqeda imicabango emibi bese isimo esibi sengqondo. Ngakho, uma ufuna ukuyeka ukukhathazeka, zama uyaqaphela kube umuntu omuhle.
Thola isizathu sokujabula kunoma isiphi isimo
Lapho abantu ziqala ukubhekana nezinkinga, ubone into ngamaphesenti ayikhulu okungalungile. Eqinisweni, kunoma isiphi isimo, ungathola okuthile okuhle lapho libhekwa ngenye. Ngokwesibonelo, ungase uthukuthele, ngesikhathi ihlezi eduze umgibeli angemahle indiza, noma ucabange ukuthi leli yithuba lokuba nesineke kakhudlwana futhi udlule ezikhathini ezinzima.
Kuzo zonke ezimbi nemicabango intukuthelo nenzondo evimba main enjabulweni. Lapho inzondo uhambele wena, wayihlukumeza kakhulu masinyane kubukela umqondo yokuthula. Ngaphezu kwalokho, awukwazi ngokwanele ukuhlola isimo nokuziphatha kwakhe kuwo, ukuze andise isimo kuphela futhi kuholela yokuthi wena uthukuthela ngokungaphezulu. Ukucwaninga kososayensi zibonisa ukuthi abantu abanemizimba intukuthelo, ubutha futhi intukuthelo, ngokuvamile uyabhekana nezinkinga zempilo. Ngokwesibonelo, sengozini enkulu yokuthola izifo eziphathelene nenhliziyo.
Miselela intukuthelo imizwa omuhle
Intukuthelo nenzondo ngeke nje simane siyishalazele ukucindezela yami. imizamo enjalo nje siya siba sibi kakhulu. Zama ukushintsha indlela, esikhundleni imizwa yabanye engakhi, kube ibekezele futhi ibayeke, hhayi ukuba sihlakulele intukuthelo. Uma uqonda ukuthi uthukuthele, zama exhale futhi ukuhlaziya isimo. Enraging? Yiziphi izici abakubangelayo? Kuyinto imizwelo eyakhayo futhi elimazayo? Cabanga ngalokhu, futhi kuyobenza bazizwe ngcono.
Lahla ukukhathazeka futhi wandise ukuzethemba
ukukhathazeka Ukwandiswa ngokuvamile kubangelwa ukuntula ukuqiniseka. UDalai Lama ukholelwa ukuthi isidingo thembeka kuwe ngokwakho futhi baqonde yonke amakhono ayo kanye nokulinganiselwa kwakho. Uma uqonda futhi wamukele ilinganiselwe, ungaqiniseka. Yakho ukuzethemba ngeke ahlupheke uma ungenzi into kunzima. Ngeke usathola sizibeka imisebenzi engenakwenzeka, futhi ngenxa yalokho akudingeki, futhi bezibeka icala ngenxa ukwehluleka ezimweni elidume non-ngokuwina. Ngakho uzoba kakhudlwana futhi udlule ezikhathini ezinzima e esikhathini esifishane.
Ukubeka imigomo: ukuqala kuphi?
Vinogradovo, inxuluma - ekhoneni mlando Russia
UMnu Gorky "Ubuntwana": isifingqo
Indlela ukupenda amashiya ipensela nezithunzi
Wire ukugqwala: izinhlobo eziyisisekelo, wokugubha kanye nokusetshenziswa